बिनोदले अनिशालाई टोक्नै नमिल्ने भनेपछि… (भिडियो) « Postpati – News For All
बिनोदले अनिशालाई टोक्नै नमिल्ने भनेपछि… (भिडियो)
साउन, बर्दिया । संसारमै बिरलै मिल्ने यो संयोग मिलेको बर्दिया र धादिङका दुई प्रभात सुवेदीको यो जोडीको । यिनै दुई जोडी धेरै अघिदेखि नामले परिचित भएपनि दुई दशकपछि मात्रै उनीहरुलाई सामाजिक सञ्जालले जोड्यो र भेटघाट भयो । अनि नाम र थर मात्रै हैन दुबै जनाको रुचीको क्षेत्रपनि मिलेपछि त अझै के चाहियो र ?
धादिङका प्रभात सुवेदी हाल काठमाडौं कलङ्कीमा बस्दै आएका छन् । विभिन्न सामाजिक क्षेत्रहरुमा निकै क्रियाशील उनी ठेट शब्दहरु बुनेर गीत लेख्न माहिर नेतृत्व विकास तथा आत्मविश्वास सम्बन्धि तालिमका कुशल सहजकर्ता पनि हुन् ।
हाइलाइट्स नेपालको च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको यो गीतको म्युजिक भिडियो निकै पृथक त छँदैछ सँगसँगै यस गीतका शब्दको उत्कृष्टताले सबैलाइ तानीरहेकोले भिडियो अपलोड भएको दुई दिनमै पचपन्न हजार बढीले यो भिडियो हेरिकसकेका छन् ।
नेपालकै चर्चित सङ्गीतकार बि.बि. अनुरागीको संगीत संयोजन रहेको र बर्दियाका प्रभात सुवेदीको सङ्गीत रहेको यो गीतमा बर्दियाली प्रभात सुवेदी र गायिका तुलसी घर्ती मगरको आवाज रहेको छ ।
बिनोद न्यौपाने र अनिशा न्यौपानेको मोडलिङ रहेको यो गीतको कोरियोग्राफी ओजश्वी साउद र आशुतोष एडीको रहेको छ । नमराज घिमिरेको क्यामेरा, सुवास डाँगीको ड्रोन, नविन सापकोटाको रङ्ग संयोजन रहेको यो भिडियोको निर्देशन भने रुद्र बोहोराले गरेका हुन् भने भिडियोको सम्पादन सन्तोष भारद्धाजले गरेका हुन् ।